Induction Heating Capacitor Mpanamboatra sy mpamatsy - China Induction Heating Capacitor Factory
Herin'asa: hatramin'ny 6000 uF
Voltage Range: 0,75kv hatramin'ny 3kv
A. Tsy misy vibration mekanika mahery vaika;
B.tsy misy entona sy etona manimba;
C.tsy misy conductivity elektrika sy vovoka mipoaka;
D.The ambient mari-pana ny vokatra dia eo amin'ny isan-karazany ny -25 ~ +50 ℃;
E. ny rano mangatsiaka dia tokony ho rano madio, ary ny mari-pana amin'ny fivoahana dia eo ambanin'ny 40 ℃.
Kapasitor elektrika feno menaka ho an'ny lafaoro fanafanana induction
Ny kapasitera rano mangatsiaka dia ampiasaina indrindra amin'ny rafitra AC azo fehezina na azo amboarina miaraka amin'ny voltase nomena isa hatramin'ny 4.8kv sy ny fatrany hatramin'ny 100KHZ mba hanatsarana ny famatsiana herinaratra amin'ny fanafanana induction, fanalefahana, fihetsehana na fanariana fitaovana ary fampiharana mitovy.
Kapasitor fanafanana induction vaovao natao ho an'ny lafaoro matetika
Ny kapasitera fanafanana induction dia natao ho an'ny fampiasana lafaoro induction sy heaters, hanatsarana ny toetran'ny herinaratra na ny toetran'ny faritra.
Ny capacitors dia film dielectric rehetra izay impregnated amin'ny tontolo iainana, tsy misy poizina biodegradable insulation menaka.Izy ireo dia natao ho toy ny rano mangatsiatsiaka velona vondrona tranga (maty raha angatahana).Ny fanamafisam-pizarana maromaro (tapping) ahafahan'ny fampitaovana avo lenta sy ny fandrindrana ny resonance dia singa mahazatra.Tena zava-dehibe ny maripana ambient sy ny fikorianan'ny rano.
Kapasitora mangatsiaka rano ho an'ny fitaovana fanafanana induction